कांग्रेस नेता डा. महतले भने –“वैदेशिक लगानीका लागि ‘नेगेटिभ लिष्ट’ लामो बनाइयो” - Gokarna News
कांग्रेस नेता डा. महतले भने –“वैदेशिक लगानीका लागि ‘नेगेटिभ लिष्ट’ लामो बनाइयो”
बिहिबार, चैत ०७, २०७५ by Gokarna News
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेकोले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताए । तर यसको लागि जति तयारी र छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो भने नभएको स्पष्ट पारे ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता महतले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै सुरुवात गरेको स्मरण गरे । उनले गिरिजाबाबुले विदेशी लगानी ल्याउनकै लागि अभियान सुरु गरेको र उदार आर्थिक नीति अगाडि सारेको बताए । उनले भने ‘बास्तवमा गिरिजाबाबुले आधुनिक नेपालका लागि ठूलो काम गर्नुभएको छ।’
साक्षात्कारमा उनले वामपन्थी सरकारले पनि गिरिजाबाबुले अघि सारेको कुरालाई स्वीकार गरेर लगानी सम्मेलन गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले अगाडि भने,‘यो त खुशीको कुरा हो, सम्मेलन सफल होस भन्ने हाम्रो शुभकामना छ, यो अति आवश्यक थियो । विदेशी लगानी नबढाई मुलुक विकास हुन सक्दैन् ।’
विदेशी लगानी आकर्षणको लागि सरकारले केही पूर्व आवश्यकत्ताहरु पूरा गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले अहिले केही नयाँ कानुनहरु पारित भएका तर विदेशी लगानीको लागि ‘नेगेटिभ लिष्ट’ पहिलेभन्दा लामो बनाईएको गुनासो गरे । महतले औद्योगिक, कृषिलगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतको श्रोत नखुलेको सम्पतिसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि…
यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने तयारीमा सरकार